हरेक नागरिकलाई वितरण गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र के हो र यसबाट कसरी लाभ लिने ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
शनिबार, फाल्गुन १५, २०७७ २०:०२
काठमाडाैं । लामाे समयदेखि बहसकाे विषय बनिरहेकाे राष्ट्रिय परिचयपत्र के हो त ? यो कस्तो हुन्छ ? लिने प्रकृया के हुन्छ ? व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता लगायतका यस्ता थुप्रै विषयमा कौतुहलता हुनु स्वभाविकै हो ।